June | 2013 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Posted on June 29, 2013 by chitnge
ဗုဒ္ဓဘာသာ၏အနေအထား ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ မြင့်မြတ်သော အနေအထားကို အလိုက်မသိသော ကမ္ဘာသို့ အနည်းငယ် တင်ပြ၊ ဖော်ပြလိုပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ တည်ဆောက်ရသော ဘာသာရပ် ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် စင်ကြယ်သော သီလ၊ တည်ငြိမ်သော သမာဓိနှင့် မြော်မြင်ဆင်ခြင်သော ပညာကို တည်ဆောက်ရသော ဘာသာဖြစ်သည်။ ဤသို့ ကျင့်ရာ၌ လွန်စွာ သိမ်မွေ့သည်။ သိမ်မွေ့လွန်း အားကြီး၍ ဆန့်ကျင့်ဘက်ဝါဒ သမားများ၏ ထိုးနှက်ချက်ကိုပင် ခံရသည်။ ဥပမာ – ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက် အောင်မြင်လျှင် … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကွန်မြူနစ်, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်	| Leaveacomment
မြန်မာနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ အင်မတန် အဆင့်မြင့်တယ်။ အဆင့်မြင့်လွန်း အားကြီးတော့ ကမ္ဘာနားလည်အောင် ပြောပြလို့လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး — ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ် ပညာကို သူငယ်တန်း ကျောင်းသားလေးတွေကို ပြောပြလို့ မဖြစ်နိုင်သလိုဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံက သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အရမ်းကျင့်ကြံ အားထုတ်တော် မူခဲ့ကြတာ။ ရဟန်းတော်များကလည်း သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာကို လွန်စွာ အဆင့်မြင့်အောင် ကျင့်ကြံကြိုးစား အားထုတ်တော် မူကြတာ။ လွန်စွာမှ ကျင့်ကြံကြိုးစား အားထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများအပြား ပေါ်ထွန်းတော် … Continue reading →
အသိပညာအရာ၌ ဗုဒ္ဓဘာသာသည်အဆင့်မြင့်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အသိပညာအရာ၌ အဆင့်မြင့်သည်။ ရုပ်နာမ်ကို ကောင်းစွာသိသည်၊ ကောင်းစွာ ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ကမ္ဘာသည် ရုပ်ကြမ်းဝါဒ သာသာမျှသာ သိသေးသည်ဟု ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ ကမ္ဘာသည် စိတ်ကို ကောင်းကောင်းမသိသေးချေ။ ထို့ကြောင့် ဦးနှောက်၏ ရောင်ပြန်ဟပ်မှု တစ်ခုမျှလောက်သာ နားလည်ထားကြသည်။ ယင်းကား ရုပ်ကြမ်းသာသာ အမြင်မျှသာ ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၌ စိတ္တာနုပဿနာဟူသည် ရှိသည်။ စိတ်ကိုရှုရသည်၊ စိတ်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာနည်းဖြင့် မြင်နိုင်သည်။ စိတ်ကို ကမ္ဘာ့နည်းဖြင့် မမြင်နိုင်ချေ။ ကမ္ဘာသည် စိတ်ကို မမြင်သောကြောင့် … Continue reading →
ကမ္ဘာသို့တိုက်ရိုက်အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ကမ္ဘာကြီးတိုးတက်နေတာ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် တိုးတက်အောင် လုပ်နေတာ ကောင်းလိမ့်မယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားဖို့ မကြိုးစား မပြင်ဆင်ပါနဲ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားရင် ကံကြီးထိုက်လိမ့်မယ်၊ ကံကြီးထိုက်ရင် မိုးမီးလောင်သွားမယ်။ ဒါကို သတိထားပါ။ တကယ်တမ်းကျ အသိပညာနယ်ပယ်မှာ ကမ္ဘာသိတဲ့ အသိပညာဆိုတာ သာမညပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒို့ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေသိတဲ့ အသိပညာက အင်မတန် နက်ရှိုင်းတယ်၊ ဥပမာ – နိဗ္ဗာန်ရှိကြောင်း သိတယ်။ တကယ်တော့ မင်းတို့ နိဗ္ဗာန်ရှိကြောင်းလည်း မသိသေးပါဘူး။ … Continue reading →
ဗုဒ္ဓဘာသာရေးရာ — စာရေးသူပြုပြင်တည့်မတ်ပေးခဲ့ရသော အကြောင်းအရာ အချက်အလက် အချို့ကို တင်ပြလိုပါတယ် – (၁) ဝိပဿနာဟာ အပျက်ရှုရတယ် – ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ ပျက်သွားမှာပေါ့ ဆိုတဲ့ အယူကို — ဝိပဿနာက ဒီလို မဟုတ်ဘူး၊ ရွှေ၊ ငွေတွေကို တိုက်ရိုက်ရှုရတာ မဟုတ်ဘူး၊ ရွှေ၊ ငွေတွေအပေါ်မှာ ထားရှိတဲ့ မှားယွင်းတဲ့ သဘောထားကို ရှုရတာ။ ဒါကြောင့် ဝိပဿနာရှုလို့ ရွှေတွေ၊ ငွေတွေ၊ အသိုင်းအဝိုင်းတွေဟာ ဘာမှမပျက်ဆီး မထိခိုက်ဘူး။ တရားတော်ရဲ့ … Continue reading →
Everybody can declare …
Posted on June 22, 2013 by chitnge
Everybody can declare … Most of the anti-Buddhists are trying to ignore the success of Buddhism and Buddhists. And also they give false interpretations on Buddha’s teachings. I make practice seriously and in the long run I realized the true … Continue reading →
အရိယာတကယ်ဖြစ်ခဲ့လျှင် — အရိယာဆိုတာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော် (မဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ထည့်မပြောပါ) တကယ် အရိယာဖြစ်ရင် – သူအရိယာ ဖြစ်ကြောင်း သူပြောချင်ရင် ပြောခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါမှန်တာကြွေးကြော်တာပဲ။ အခုခေတ်စကားနဲ့ ပြောရင် ဒါဟာ လူ့အခွင့်အရေးပါ — သူက ကျင့်လို့ရတာကိုး။ ရတဲ့အခါကျ ပြောတာပေါ့ – မပြောရဲစရာအကြောင်း ဘာမှ မရှိပါဘူး။ အဲဒါ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို နှိမ်တဲ့အကွက်နဲ့ ဝင်ကြတာရှိပါတယ် “မပြောကောင်းဘူး” လို့ ဒါ သက်သက်နှိမ်ကွက် ဖြစ်ပါတယ် — ယောဂီများ … Continue reading →
Posted on June 20, 2013 by chitnge
မြန်မာတွေကောင်းကြောင်းပြောကြဦးစို့ မြန်မာများရဲ့ ကောင်းကြောင်းကို ပြောဖို့အတွက် စဉ်းစားမိစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ယခုအခါမှာ မြန်မာတွေ မကောင်းကြောင်း ပြောတာတွေက များနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာတွေ ကောင်းကြောင်း တလှည့်ပြောကြပါဦးစို့လို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ကောင်းပါတယ်၊ မြန်မာတွေလည်း ကောင်းပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဥပမာ — ရန်ကုန်မှာဆို ရွှေတိဂုံ ဘုရားကြီးရှိတယ် ဘယ်လောက် ကောင်းလိုက်လဲ — ဒီဘဒ္ဒကမ္ဘာမှာ ဘုရားလေးဆူ ပွင့်တော်မူခဲ့ပြီ။ လေးဆူစလုံးရဲ့ ဓာတ်တော်၊ မွေတော်တွေရှိတဲ့ ရွှေတိဂုံကြီးဟာ တကယ့်အနှစ်သာရ Tags: Buddhism, Myanmar … Continue reading →
စီးပွားရေးအပိုင်းကကြိုးစားလျှင်တိုးတက်နိုင်ပါတယ် စီးပွားရေးကို စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပေါ်ထွန်းလာတာ ဝမ်းသာစရာပဲ။ စီးပွားရေးက ဖြစ်တန်ရာချေ များပါတယ်။ ကိုယ်က ကြိုးစားဖို့ပဲ။ တရားရေးတို့ လောကုတ္တရာ အရေးတို့ကတော့ ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့မှ ဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့ရင် ဆယ့်သုံးမိုင်ပတ်လည် သံမဏိထုထည် တုံးကြီးကို လက်သည်းခွန်နဲ့ ခြစ်ပြီးတော့ ပေါက်အောင် ကြိုးစားသလို ဥပမာ တင်စားမှုရှိတယ်။ စီးပွားရေးက ဒီလောက်မခက်ပါဘူး။ မှန်မှန်ကန်ကန် ကြိုးစားဖို့ပဲ။ အပျော်အပါး လိုက်စားမှုတော့ လျော့ပေါ့။ ကိုယ်က စီးပွားရေးသမားပဲ။ အာရုံတွေကိုတော့ လျော့ပေါ့။ နောက် အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်မှု လေးတွေကို ၀င်စားပြီး … Continue reading →
စီးပွားအမှန်တိုးတက်လိုလျှင် ကျွန်တော်ကတော့ စီးပွားရေးသမားတော့ မဟုတ်ပါဘူး – ဒါပေမယ့် စီးပွားရေးကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပရိသတ်များက စိတ်ဝင်စားနေကြတော့၊ စီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ ဆိုရင် — (၁) အာရုံတွေကိုလျှော့ပါ။ အာရုံတွေ လိုက်စားနေလို့ကတော့ စီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့က အားနည်းတယ်။ အာရုံကိုလျှော့ရမယ်။ (၂) စီးပွားဖြစ်ချင်ရင် စီးပွားဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ပဲထားပါ။ အာရုံတွေနောက် ဘာလို့တကောက်ကောက် လိုက်နေမှာလည်း၊ စီးပွားဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ပဲထားရမယ်။ ဒါကတော့ စီးပွားဖြစ်ချင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒ ပြည့်စုံအောင်ဆိုရင် စီးပွားရေးသာလိုက်ပြီး အာရုံတွေနောက် လိုက်စားတာကို လျှော့လိုက်ရင် အဓမ္မရာဂတွေလည်း ပါမှာမဟုတ်ဘူး။ … Continue reading →